ရာသီကုန်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် နာမည်ကျော်ကစားသမားများ (၁)
6 Nov 2018 . 11:55 AM
(၁) ဒီဂီယာ Degea
မန်ယူဂိုးသမား ဒီဂီယာ Degea ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကို အချိန်ဆွဲနေပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဒီဂီယာ ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကလည်း ထွက်နေတာကြောင့် မန်ယူပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ရင်မောစရာပါပဲ။ ဒီဂီယာ ဟာ အသင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ ကစားသမားဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒီဂီယာ အသင်းမှာဆက်ရှိနေဖို့အတွက် မန်ယူအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းသွားရမှာဖြစ်ပြီး ဒီဂီယာနဲ့ မန်ယူတို့ရဲ့ စာချုပ်မှာ တစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့် ပါရှိနေတာကြောင့်သာ အနည်းငယ်သက်သာရာရနေတာပါ။
(၂) အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ် Alderweireld
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလတုန်းက မန်ယူအသင်းရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စပါးနောက်ခံလူ အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ် Alderweireld ဟာလည်း ရာသီကုန်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ်နဲ့ စပါးတို့ရဲ့ စာချုပ်မှာလည်း တစ်နှစ်ထပ်တိုးခွင့်ပါဝင်နေပါတယ်။
(၃) ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် David Luiz
ချယ်လ်ဆီးနောက်ခံလူ ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် David Luiz ဟာ ရာသီကုန်မှာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ရှိတယ်လို့ အသံတွေထွက်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အေးစက်နေကြပါတယ်။ နည်းပြ ဆာရီ Serri လက်ထက်မှာ ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ်ဟာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကို ပြနေတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက် အရာအားလုံးပေးဆပ်ကစားတတ်တဲ့သူလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ သူ့ကို အမြန်ဆုံး စာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
(၄) မွန်ရီယယ်လ် Monreal
မွန်ရီယယ်လ် Monreal ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ရှိနေပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ မွန်ရီယယ်လ် ဟာ အသက်(၃၂)နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပေါ်လစီကြောင့် သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
(၅) ဖီလစ်ပီလူးဝစ်ဇ် Filipe Luís
ဖီလစ်ပီလူးဝစ်ဇ် Filipe Luís ဟာ အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ခြေစွမ်းပြကစားနေပေမယ့် စာချုပ်သစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာသတင်းမှတော့ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အက်သလက်တီကိုအသင်းဘက်က အခုလိုငြိမ်သက်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ပြင်သစ်လူငယ်ဘယ်နောက်ခံလူ Lucas Hernández လူးကပ်စ် ဟာနန်ဒက်ဇ် ကြောင့်လို့ပဲ ယူဆရပါလိမ့်မယ်။
Photo: Football Fancast , Sporting News , Yahoo! Sports – Yahoo News , The Independent , Premier League
ရာသီကုနျမှာ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးမယျ့ နာမညျကြျောကစားသမားမြား (၁)
မနျယူဂိုးသမား ဒီဂီယာ Degea ဟာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့ကို အခြိနျဆှဲနပေါတယျ။ လကျရှိမှာ ဒီဂီယာ ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကေလညျး ထှကျနတောကွောငျ့ မနျယူပရိသတျတှအေတှကျတော့ ရငျမောစရာပါပဲ။ ဒီဂီယာ ဟာ အသငျးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈတဲ့ ကစားသမားဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒီဂီယာ အသငျးမှာဆကျရှိနဖေို့အတှကျ မနျယူအသငျးတာဝနျရှိသူတှေ အနနေဲ့ အကောငျးဆုံးကွိုးပမျးသှားရမှာဖွဈပွီး ဒီဂီယာနဲ့ မနျယူတို့ရဲ့ စာခြုပျမှာ တဈနှဈထပျတိုးခှငျ့ ပါရှိနတောကွောငျ့သာ အနညျးငယျသကျသာရာရနတောပါ။
(၂) အယျလျဒါဝီရယျလျ Alderweireld
ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလတုနျးက မနျယူအသငျးရဲ့ ပဈမှတျဖွဈခဲ့တဲ့ စပါးနောကျခံလူ အယျလျဒါဝီရယျလျ Alderweireld ဟာလညျး ရာသီကုနျမှာ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အယျလျဒါဝီရယျလျနဲ့ စပါးတို့ရဲ့ စာခြုပျမှာလညျး တဈနှဈထပျတိုးခှငျ့ပါဝငျနပေါတယျ။
(၃) ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ David Luiz
ခယျြလျဆီးနောကျခံလူ ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ David Luiz ဟာ ရာသီကုနျမှာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ ဟာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့ရှိတယျလို့ အသံတှထှေကျခဲ့ပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာတော့ အေးစကျနကွေပါတယျ။ နညျးပွ ဆာရီ Serri လကျထကျမှာ ဒေးဗဈလူးဝဈဇျဟာ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှကေို ပွနတေဲ့ ကစားသမားဖွဈပွီး အသငျးအတှကျ အရာအားလုံးပေးဆပျကစားတတျတဲ့သူလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ သူ့ကို အမွနျဆုံး စာခြုပျသကျတမျးတိုးနိုငျဖို့လိုအပျနပေါတယျ။
(၄) မှနျရီယယျလျ Monreal
မှနျရီယယျလျ Monreal ဟာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ရှိနပေမေယျ့ လကျတှမှေ့ာတော့ ဖွဈမလာသေးပါဘူး။ မှနျရီယယျလျ ဟာ အသကျ(၃၂)နှဈရှိနပွေီဖွဈပွီး အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အပွောငျးအရှပေ့ျေါလစီကွောငျ့ သူ့ရဲ့အနာဂတျဟာ စိတျဝငျစားစရာဖွဈနပေါတယျ။
(၅) ဖီလဈပီလူးဝဈဇျ Filipe Luís
ဖီလဈပီလူးဝဈဇျ Filipe Luís ဟာ အကျသလကျတီကိုအသငျးမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ခွစှေမျးပွကစားနပေမေယျ့ စာခြုပျသဈနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဘာသတငျးမှတော့ ထှကျပျေါလာခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ အကျသလကျတီကိုအသငျးဘကျက အခုလိုငွိမျသကျနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ ပွငျသဈလူငယျဘယျနောကျခံလူ Lucas Hernández လူးကပျဈ ဟာနနျဒကျဇျ ကွောငျ့လို့ပဲ ယူဆရပါလိမျ့မယျ။